Akụkọ - Hengxing so na 53rd CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO
Hengxing sonyere na CHINA INTERNATIONAL BEAUTY EXPO nke iri ise na atọ
Ngosipụta ahụ bụ ihe ngosi ịma mma kachasị ukwuu na China, nchịkọta igwe, ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, ngwaahịa nlekọta onwe onye, ​​ngwaahịa ndị ọkachamara mara mma, etemeete, Nlekọta Ahụike na ihe ndị ọzọ.
The Hengxing igwe nlezianya kwadebere, na ikenyeneke mbiet larịị nke technology, elu-arụmọrụ; usoro ultrasonic tube akara akụrụngwa ọzọ ghọọ isi ihe dị mkpa na ngosi ahụ. Nwere ọgụgụ isi imewe na mara mma akara n'ihi nke dị iche iche ihe, ka dọtara ọtụtụ anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-azụ ahịa gbakọtara na-ekiri na alo na-atụle. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa wetara nsogbu ọrụ aka na-arụ na nhazi ọnọdụ ahụ, mgbe afọ iri na ụma iri afọ gara aga na-enwu enwupụta injinia na usoro nhazi njikarịcha, ọtụtụ afọ ojuju ndị ahịa, saịtị ahụ zubere ịzụta.
Ọ bụ njem owuwe ihe ubi. Ihe ngosi ahụ, rere ụlọ ọrụ ihe ngosi ihe niile na-akpata hengxing, dịka ọmụmaatụ ndị ahịa anyị na Vietnam na-enye iwu otu setịpụrụ ultrasonic tube na-ejuputa igwe na ihe ngosi, anyị weghachitere ọtụtụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị ọrụ njedebe na ndị na-ere ahịa bara ezigbo uru.
Henxging Machinery Equipment in the ultrasonic tube sealing machinery industry mere ogologo oge mmepe na ihe ịga nke ọma na afọ ndị na-adịbeghị anya; e nwere ụfọdụ ika nketa, mmepe nke ụda. Na ezi ikike n'ire nkà, Ọbụna anyị nwere na ubi nke ultrasonic akara akụrụngwa enyene a dị oké mkpa na ọnọdụ. ma anyị makwaara na ”ọ dị mkpa ịga ogologo ụzọ. Anyị ga-anọgide na-eme ka usoro nlekọta njikwa, iji mee ka usoro ntinye ngwa ngwa Hengxing dị ngwa, ihu ziri ezi na ahịa ahịa, na-emekwu igwe na ọrụ ndị ahịa na ndị enyi.